Xisbiga KULMIYE oo xadhiga ka jaray xafiiska xisbiga KULMIYE ku yeelan doono Degmada Daarasalaam ee gobolka Maroodijeex. |
Xisbiga KULMIYE oo xadhiga ka jaray xafiiska xisbiga KULMIYE ku yeelan doono Degmada Daarasalaam ee gobolka Maroodijeex.
Hargeisa(GNN):-Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodijeex Maxamed iid dhimbiil oo ay weheliyaa guddoomiye ku xigeenka xisbiga KULMIYE ee gobolka maroodijeex Cabdiraxmaan Yusuf Hadhiye iyo xubno kale oo ka socday guddiga fulinta ee gobolka maroodijeex ayaa maanta xadhiga jaray xafiis cusub oo xisbiga KULMIYE ku yeelanayo degmada Daarasalaam ee gobolka Maroodijeex.
Munaasibad loo sameeyay Xadhig ka jarista Xafiiskani cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiiro , madaxda kale oo ka socotay Xukumada Somaliland, Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodijeex Maxamed iid dhimbiil ayaa bulshada deegaanka Daarasalaam u sharaxay muhiimada Xafiiskani iyo hawlaha uu qaban doono waxaana uu ku dheeraaday sababta ay degmada Daarasalaam muhiimada koowaad u siiyeen ka gobol ahaan.
Guddoomiyaha Degmada Daarasalaam ee xisbiga KULMIYE Saleebaan Xuseen Cumar iyo guddoomiyaha Garabka haweenka xisbiga Kulmiye ee degmada Daarasalaam Xamda Cabdi Saleban ayaa sheegay inay degmada Daarasalaam tahay mid taageero balaadhan u haysta xisbiga KULMIYE .
Salaadiinta iyo Odayaasha degmada Daarasalaam ayaa sheegay inay degmadani tahay degmooyinkii dhaliyay guushii xisbiga KULMIYE maalkoodii iyo muruqoodiina ku dhisay Xukumada maanta isla markaasna aanay wakhtigan la joogona diyaar u ahayn inay meel kale maraan balse ay garabtaagan yihiin xisbigoodii hore.
Wasiirka Cadaalada Somaliland mudane Axmed Faarax Caddare ayaa dadweynaha Degmada Daarasalaam uga mahadceliyay soo dhaweynta iyo taageerada buuxda ee ay siiyeen Xisbiga KULMIYE sidoo kalenna waxa uu wasiirku bulshada deegaanka kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan qaadhashada kaadhka codbixiyaha oo dhawaan laga bilaabi doono maroodijeex, Guddoomiyaha Gobolka Maroodijeex iyo Maareeye ku xigeenka Wakaalada biyaha ayaa iyagu halkaasi hadalo dardaaran ah kasoo jeediyay.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda boostaha iyo Isgaadhsiinta Faysal Cali Sheikh iyo Wasiirul dowlaha Arrimaha gudaha ayaa bulshada kula dardaarmay ilaalinta nabadgalya sidoo kalenna waxay bulshada deegaanka ku diirigaliyeen inay wakhtigan oo xilli roobaadkii bilaabmay ka faa,iidaystaan biyaha cirka.
Xafiiskani Cusub ee xisbiga KULMIYE ka furtay degmada Daarasalamaan ayaa noqonaya xafiiskii horeeyay ee xisbiyada Somaliland ka furtaan degmada daarasalaam , waxaanna uu noqon doonaa isku xidhaha dadweynaha degmada daarasalaam iyo xisbiga KULMIYE sida ay sheegeen masuuliyiinta xisbiga Kulmiye .